ဆရာခို မန်ဆေးအား မဆီမဆိုင် ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့ ဆရာဝန်မ ကို တရားစွဲမည် – Daily Feed MM
ဆရာခို မန်ဆေးအား မဆီမဆိုင် ပုတ်ခတ်စော်ကားတဲ့ ဆရာဝန်မ ကို တရားစွဲမည်
Admin_John | October 11, 2020 | Local News | No Comments
အများပြည်သူသုံးစွဲနေသောတိုင်းရင်းဆေးထဲမှ မောရိယမန်းဆေး နှင့် ဆရာခိုဆေးအားမကောင်းပုတ်ချသော ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ကိုတရားစွဲတော့မည်ဒါကတော့ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ခဲ့ပါ…Bad review ဆိုတာရှိရင် ပြောကြတဲ့
လူကို တရားစွဲလားခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်က COVID ကာလကြီးထဲ COVID ကူးနိုင်ချေ အန္တရာယ်များရတဲ့ကြားထဲ တောက်လျှောက် ဒီလိုမျိုး လူနာတွေအတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ကျန်းမာရေးပညာပေးနေတာကိုBy name တပ် ပြောလို့ အသရေဖျက်
တယ်တဲ့အသရေဖျက်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံပြောတာပါ။လူနာတွေအားလုံးရဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေ ပြုစုထားပါတယ်ဆေးတစ်မျိုးရဲ့ အာနိသင် ဘယ်ရောဂါမှာ ဘယ်လိုပျောက်ကင်းကြောင်း ဘာဆိုးကျိုးတွေရှိကြောင်း လူပေါင်းများစွာကို စမ်းသပ်ထားကြာင်းတွေ
Update(Sayar kho news)
“ကုသိုလ် နှင့် အကုသိုလ်”“ကုသိုလ်”ပါရမီမြောက် ကာလဒါန ကုသိုလ်အဖြစ်(၁) (Covid-19)ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ကော်မတီသို့ သိန်း(၃၀)။
(၂) ရန်ကုန်တိုင်း (Covid-19)ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး ကော်မတီသို့ သိန်း(၂၀)။ ။
(၃) ဆရာခို/ဓောဓံဓ ဝန်ထမ်းများအား (Covid-19)ဒုတိယ လှိူင်းကာလအတွင်း အလုပ်ရုံ (ခေတ္တ)ပိတ်ထားစဉ် အဆင်ပြေရန်အတွက် (ဒုတိယ)အကြိမ် တစ်ဦးလျှင် (၁)သိန်းကျပ် ထောက်ပံ့ခြင်း။ ။
တိုင်းရင်းဆေး လောကတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၀)ကျော်၊(၁၀၀)ကျော် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည့် အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့ပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြား လူသိများ၍ လက္ခံဝယ်ယူသုံးစွဲမှု ရရှိနေသည့် ဆေးတိုက်ကြီး နှစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေသည့် တိုင်းရင်းဆေးများအား(ဆ
ရာဝန်မ)တစ်ဦးက အထင်သေး၊ပုတ်ခတ်စော်ကားကာ “Live” လွှင့်ပြောကြားခဲ့မှု အပေါ် အရေးယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ….(သား)ဆရာခိုသုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများ ထံသို့ ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။
“အစာဝ၊အနာကင်း၊ဘယာရှင်း ကြပါစေ”….မန့်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါအုံးယခုလိုအဆုံးထိဖတ်ရှု့ပေးကြသော သမီးလေး-သို့ပရိတ်သတ်ကြီးအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
အမ်ားျပည္သူသုံးစြဲေနေသာတိုင္းရင္းေဆးထဲမွ ေမာရိယမန္းေဆး ႏွင့္ ဆရာခိုေဆးအားမေကာင္းပုတ္ခ်ေသာ ေဒါက္တာျမဝတ္ရည္ကိုတရားစြဲေတာ့မည္ဒါကေတာ့ေဒါက္တာျမဝတ္ရည္ကိုယ္တိုင္သူ႔ရဲ႕လူမႈစာမ်က္ႏွာေပၚမွာတင္ခဲ့ပါ…Bad review ဆိုတာရွိရင္ ေျပာၾကတဲ့
လူကို တရားစြဲလားခြဲစိတ္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္က COVID ကာလႀကီးထဲ COVID ကူးႏိုင္ေခ် အႏၲရာယ္မ်ားရတဲ့ၾကားထဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒီလိုမ်ိဳး လူနာေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ က်န္းမာေရးပညာေပးေနတာကိုBy name တပ္ ေျပာလို႔ အသေရဖ်က္
တယ္တဲ့အသေရဖ်က္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံေျပာတာပါ။လူနာေတြအားလုံးရဲ႕ ေဆးမွတ္တမ္းေတြ ျပဳစုထားပါတယ္ေဆးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အာနိသင္ ဘယ္ေရာဂါမွာ ဘယ္လိုေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ဘာဆိုးက်ိဳးေတြရွိေၾကာင္း လူေပါင္းမ်ားစြာကို စမ္းသပ္ထားၾကာင္းေတြ
“ကုသိုလ္ ႏွင့္ အကုသိုလ္”“ကုသိုလ္”ပါရမီေျမာက္ ကာလဒါန ကုသိုလ္အျဖစ္(၁) (Covid-19)ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီသို႔ သိန္း(၃၀)။
(၂) ရန္ကုန္တိုင္း (Covid-19)ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရး ေကာ္မတီသို႔ သိန္း(၂၀)။ ။
(၃) ဆရာခို/ေဓာဓံဓ ဝန္ထမ္းမ်ားအား (Covid-19)ဒုတိယ လွိူင္းကာလအတြင္း အလုပ္႐ုံ (ေခတၱ)ပိတ္ထားစဥ္ အဆင္ေျပရန္အတြက္ (ဒုတိယ)အႀကိမ္ တစ္ဦးလွ်င္ (၁)သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပံ့ျခင္း။ ။
တိုင္းရင္းေဆး ေလာကတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္၊(၁၀၀)ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ၿပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ား၍ လကၡံဝယ္ယူသုံးစြဲမႈ ရရွိေနသည့္ ေဆးတိုက္ႀကီး ႏွစ္ခုမွ ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ီေနသည့္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားအား(ဆ
ရာဝန္မ)တစ္ဦးက အထင္ေသး၊ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားကာ “Live” လႊင့္ေျပာၾကားခဲ့မႈ အေပၚ အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ….(သား)ဆရာခိုသုံးစြဲသူ မိဘျပည္သူမ်ား ထံသို႔ ျပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
“အစာဝ၊အနာကင္း၊ဘယာရွင္း ၾကပါေစ”….မန႔္ခ်က္ေလးေတြေပးခဲ့ၾကပါအုံးယခုလိုအဆုံးထိဖတ္ရႈ႕ေပးၾကေသာ သမီးေလး-သို႔ပရိတ္သတ္ႀကီးအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ေကာင္းေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ။
ခြင်ဆေးခွေအနံ့လည်းမခံနိုင်ဘူး ၊ ခြင်ကိုက်လည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုသူတွေ အတွက် သဘာဝ ခြင်ပြေးဆေး
စိုးရိမ်စရာသတင်း.. အိုမီခရွန် မြန်မာပြည်မှာ တွေ့ပြီတဲ့